सिंहदरबार अगाडि संसद् सचिवालयको गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक गम्भीर घाइते – Crime News Nepal
सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोकाअघि आज संसद्को सवारी साधनसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक गम्भीर घाइते भएका छन् ।
बिहान सवा ११ बजे गलत दिशाबाट आइरहेको सरकारी नं. प्लेटको सवारी साधनले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार यात्रु महोत्तरीका २२ वर्षीय सलन बरालको दुवै गोडामा गम्भीर चोट लागेको ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारले जनाएको छ ।
घाइते बरालको काठमाडौँ मोडेल अस्पताल प्रदर्शनीमार्गमा उपचार भइरहेको प्रभागका प्रहरी जवान हेमन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश ३–०२, ००२ प, ९८७० नं. को मोटरसाइकललाई पुतलीसडक तिरबाट आएको सङ्घीय संसद् सचिवालयको सरकारी नं. प्लेटको प्रदेश ३-०१, ००२ झ, ४८७९ नं. को स्कार्पियो गाडीले ठक्कर दिएको थियो ।
सो गाडी संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले चढ्ने गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारका प्रहरी जवान आचार्यले जानकारी दिए ।
गलत दिशाबाट आएको सरकारी गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमुनि खटिएका ट्राफिक प्रहरी खीना सुवेदीले बताइन् । हतारमा भएकाले बत्ती बालेर सवारी आएको उनले जानकारी दिइन्।
लेन अनुशासन पालना नगरेमा रु ५०० देखि रु एक हजार ५०० सम्म जरिवाना लेखिएको बोर्डलाई देब्रे पारेर सरकारी गाडी गलत दिशाबाट आइरहेको थियो । गाडीको अगाडितिर सिसामा सङ्घीय संसद् सचिवालय लेखिएको कागजको पास राखिएको थियो ।
सरकारी गाडीका चालक लेखमान शाक्यले नै घाइतेको उपचार गराइरहेको उनले बताइन् । संसद् सचिवालयकै गाडी भए पनि कानूनअनुसार नै कारबाही गरिने प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।
संवेदनशील स्थानमा समेत सरकारी गाडीले गलत दिशाबाट आएर ठक्कर दिनु सामान्य घटना नभएको पैदल यात्रु राघवेन्द्र बजगाईँले बताए । छानबिन गरी यसका दोषीलाई कानुनी कारबाही नगरे सडकमा पैदल यात्रु एवं अन्य चालक पनि सुरक्षित नहुने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्षरूपमा घटना देखेका बजगाईँ सरकारी गाडीका चालकको लापरवाहीले यस्तो भएको बताउछन् ।
प्रकाशित मिति : सोमबार, मंसिर २३, २०७६ ०९:०७:५९
डडेल्धुरामा नुहाउन गएका एक पुरुषलाई खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। स...
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । जिल्लाकाे राजविराज...
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका- ४ मा कार दुर्घटना हुँदा चालकसहित ३ ज...
दाङमा स्कार्पियोको ठक्करबाट २ जनाको मृत्यु...
दाङमा शनिबार राति बाटो काट्ने क्रममा स्कार्पियोले ठक्कर दिँदा घाइते...
मकवानपुरमा मालवाहक ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ए...
टोखामा पहिरोले पुरिएर जुम्ल्याह दिदी भाइका...
काठमाडौंको टोखामा पहिरोमा परी जुम्ल्याहा दिदी भाइकाे मृत्यु भएको छ।...
दार्चुलामा पहिराले घर पुरिँदा दाजुभाइकाे म...
दार्चुलामा पहिराले घर पुरिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घ...